नेपाल ल्यूव आयलको सेयरमूल्य समायोजन, समायोजन पछिको भाउ कति ? - Arthasansar
नेपाल ल्यूव आयलको सेयरमूल्य समायोजन, समायोजन पछिको भाउ कति ?
मंगलबार, ०५ असोज २०७८, १० : ४५ मा प्रकाशित
नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) मा नेपाल ल्यूव आयल लिमिटेडकाे सेयरमूल्य समायोजन भएको छ ।
कम्पनीकाे ३० प्रतिशत बोनस सेयर पछि नेप्सेले प्रतिकित्ता २ सय ४३ रूपैयाँ कायम हुने गरी सेयरमूल्य समायोजन गरेको हाे । नेप्सेले साेमबारकाे अन्तिम कारोबार मूल्य ३ सय १६ रुपैयाँका आधारमा मूल्य समायोजन गरेको हो । नेप्सेले प्रकाशन गरेकाे सूचनामा भने ३० प्रतिशतकाे ठाउँमा १० प्रतिशत लेखिएकाे छ ।
कम्पनीले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट सेयरधनीहरुका लागि ३० प्रतिशत बोनस सेयर र ५ प्रतिशत नगद लाभांश वितरणको प्रस्ताव गरेको छ ।कम्पनीले असोज १८ गते कम्पनीकाे कार्यालय झम्सिखेल, ललितपुरमा वार्षिक साधारण सभा गर्दैछ ।